2566औं बुद्ध जयन्तीमा पहिलोपल्ट कुशीनगर आउनेछन् प्रधानमन्त्री मोदी - Hindusthan Samachar Nepali
12 May 2022 21:12:10
कुशीनगर, 12 मई (हि.स.)। हुन त गौतम बुद्धको महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामसहित धेरै देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू आइरहेका छन्। तर, पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बुद्ध जयन्तीको अवसरमा कुशीनगर आइरहेका छन्।
बुद्ध पूर्णिमालाई वैश्विक बौद्ध जगतमा विशेष महत्व प्राप्त छ। वास्तवमा यस तिथिमा लुम्बीनीमा बुद्धको जन्म भएको थियो। कुशीनगरमा बुद्धले निर्वाण पनि यसै तिथिमा प्राप्त गरेका थिए र बोधगयामा ज्ञानको प्राप्ति पनि पूर्णिमा तिथिमा नै भएको थियो। बौद्ध धर्मगुरुहरूले यसलाई त्रिविध पावन बुद्ध पूर्णिमाको नाम दिएका छन्। विश्वभरिका बौद्ध अनुयायीहरूले यस तिथिलाई पर्वको रूपमा मनाउॅंछन् र विविध प्रकारका अनुष्ठान र रचनात्मक आयोजन गर्छन्।
कुशीनगरमा पनि बुद्ध जयन्ती समारोहपूर्वक मनाइने छ। म्यान्मार, थाईल्याण्ड, श्रीलंका, जापान, कोरिया, भूटान, वियतनाम, इण्डोनेशियाको बौद्ध विहार यहॉं स्थित छ। यी देशहरूका बौद्ध भिक्षुहरू समारोहमा सहभागी बन्ने गर्छन्। महापरिनिर्वाण मन्दिरसहित सबै बौद्ध विहारहरूमा धेरै दिनसम्म विविध अनुष्ठान शुरू हुन्छ। बुद्ध जयन्ती समारोहमा प्रदेशका मन्त्रीसहित उच्च अधिकारी, विदेशी राजनयिक सामेल हुन्छन्। तर, 2566औं बुद्ध जयन्ती पहिलो यस्तो अवसर हो जब महापरिनिर्वाण भूमिका देशका प्रधानमन्त्रीले पाइला टेक्नेछन्। प्रधानमन्त्रीको आगमनलाई लिएर बौद्ध भिक्षुहरूमा खुशीको माहोल छाएको छ।
महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमतमा, निर्णय लिने अधिकार छैन- रामदास आठवले
मुम्बई, 25 जून (हि.स.)। केन्द्रिय मन्त्री रामदाश आठवलेले शनिवार महाराष्ट्रमा महाविकास आघाड़ी सरकार अ..
राष्ट्रपति उम्मेदवार द्रौपदी मुर्मूले हेमन्त सोरेनबाट समर्थन मागिन्
रांची, 25 जून (हि.स.)। राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) की राष्ट्रपति पदकी उम्मेदवार द्रौपदी मु..
कांग्रेसले भाजपामाथि डीएचएफएलबाट डोनेशन लिएको आरोप लगायो
नयाँ दिल्ली, 25 जून (हि.स.)। कांग्रेसले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) माथि डीएचएफएल कम्पनीबाट 28 करोड़ ..
प्रधानमन्त्रीले आइतवार 'मनका कुरा' गर्ने
नयाँ दिल्ली, 25 जून (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतवार बिहान 11 बजी मासिक रेडियो कार्यक्र..